Intsimbi ye-Metate yensimbi yesiqhelo kunye nomthengisi | UAlice
Uzibophelele ekuyileni nasekuveliseni iifayile zentsimbi ukusukela ngo-1998
Iibheji zentsimbi-Iimveliso zakho ze-Breaksi
Imveliso ephambili ka-Alice inohlobo lonke lwebhodi ebiweyo kwintsimbi engenasitali, i-titanium, kobhetele kwi-aluminium njalo njalo. Ukugubungela i-etching, Ukuphosa i-Dissonce, i-oxiding, iPoliding, irabha kwiNkqubo njl.
Gxila kwifanitshala kunye nentsimi ye-elektroniki.
Umgangatho oPhezulu weRekhodi yeAluminiyam yoMgangatho oPhezulu
Umenzi weLeaminum weLeaminum Lelebheli, Iinkcukacha malunga nelebhile ye-Aluminum.Iminyaka engama-21 yamava emveliso yentsimbi yentsimbi, ukusuka kuyilo lwentengiso ukuze kubekho ukubumba, yonke ikhonkco linengqondo; nyula yonke inkqubo yolawulo, kwaye uzama ukudala Owona mgangatho ugqibeleleyo.
Eyona ndawo inesijikelezi ye-CD ye-CD ye-Aluminum ye-Badge ye-Badge-Alice
Ngaba ujonge umthengisi we-aluminium ojikelezileyo? Iinkcukacha malunga nebheji ye-aluminium ejikelezileyo.((Alice) siyishishini le-SITER yentsimbi ye-21. Sinabasebenzi abangaphezu kwe-100, isiseko semitha esiyi-1500 yeemitha, kwaye siqhubeke nokwazisa izixhobo zemveliso zanamhlanje. Ukwenzela ukuba uhlangabezane neemfuno zokhuphiswano lwentengiso kwaye ulandele imeko yezoqoqosho, kwiminyaka yakutshanje, siphuhlise ishishini le-E-Commerce Remoreser e-E-Commer, eyenza inkqubela phambili kwaye iqhubela phambili.
Eyona china ilungileyo ye-Aluminim ye-Aluminium bomers-Alice Alice-Alice
Inkqubo ye-Aluminum yeAluminum, iinkcukacha malunga nebheji yealuminim efanelekileyo.UAlice Wich China olona candelo le-Aluminium ye-Aluminium-Alice, i-Alice, umzi-mveliso wakho kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-100, iindleko zingaphantsi kwe-2% yomgangatho ofanayo.Si (Alice) singumenzi weempawu zefanitshala, sinokuvelisa i-zinc, ialuminiyam, i-charper, i-PVC, i-PVC, njl njl.
Iilebheli ze-Aluminium zisetyenziswa ngokubanzi kubomi bemihla ngemihla-china Aluminum Bordgers-Alice
Ngaba ujonge ibheji ye-aluminium? Iinkcukacha malunga nebheji ye-aluminium ebomvuIbheji lelona candelo libalulekileyo layo nayiphi na imveliso yokuchongwa kwayo umfanekiso kunye namandla omvelisi.I-alloy esekwe kwi-aluminium enenani elithile lezinye izinto zenye yezixhobo zentsimbi ekhanyayo.
Kutheni i-alsses Alice?
UAlice ugubungela iimitha ezingama-2000 kwaye kukho izinto ezingaphezu kwama-50 ezisebenza apha apho kubandakanya wonke iSebe leSebe: i-QC, iMveliso, iSavice, Iqela lethu eliSebenzayo liza kwenza umgangatho omkhuluI-ANTATATES zensimbi yeyakho.
Ukuza kuthi ga ngoku, uAlice sele ebambe amalungelo awodwa omenzi wechiza, kwaye unenkonzo yemfuneko nganye. Ikwakha iNtloko yeSicwangciso sexesha elide kunye neenkampani ezininzi ezidumileyo, umzekelo we-Fox: Huawei, i-Apple Red njl.
IQela eliQhagamshela iRhwebo
Yonke iprojekthi esisebenza kuyo ijongiwe ukuba ukuqinisekiswa komgangatho wokwanelisa iimfuno zoluntu lwanamhlanje.
UAlice uzinikele kwimveliso echanekileyo kuba isungulwe ngo-1998, ngakumbi ukugxila kwifanitshala kunye nentsimi ye-elektroniki.
Imveliso ephambili ka-Alice inohlobo lonkeI-ANTATATES zensimbi yenziwe kwintsimbi engenasimo, i-titanium, yobhedu ukuya kwi-aluminium njalo njalo. Ukugubungela i-etching, ukucocwa kwe-contration, i-oxiding, ipoliding, irabha yenkqubo, i-Alice, i-Alice Inombolo yeNdlu, isitithi sePlayithi, i-Plate, i-Plate, ikhowudi ye-Plate, i-Plate Stickers, iikhowudi zePlate, i-Plate, i-Plate, i-Plate, ikhowudi yePlate, i-Plate.
Msgstr "Phantsi kakhulu, ukusebenza kakuhle" kuthathwa njengombono wethu ophucukileyo.
Imveliso ephambili ka-Alice inohlobo lonke lwebhodi ebiweyo kwintsimbi engenasitali, i-titanium, kobhetele kwi-aluminium njalo njalo. Ukugubungela i-etching, ukucombulula i-oxiding, i-oxiding, ipolishing, irabha yenkqubo, i-Alice, uphawu lweNdlu, izitikha ze-PART,Iileyibhile zentsimbi zefanitshala kwaye nangokunjalo.
Ukuqhubekeka ngokwezifiso ngokwemiqondiso yentsimbi, inkqubo yokuveliswa kwesitampu yemizi-mveliso ye-Alice
Umgaqo-siseko womatshini otyumkileyo kukuqhuba i-flywheel ngemoto, kwaye ngegiya kunye negiya yodluliselayo ukuqhuba isilayidi kwaye uqhagamshele indlela yokuzoba ukuhambisa ipleyiti yentsimbi. Inyathelo elibizwa ngokuba li-mbini lithetha ukuba amaphephandaba anezilayidi ezimbini, ezahlulwe zasisilayidi zangaphakathi kunye nesilayidi esingaphandle. Isilayidi sangaphakathi siqhuba i-punch okanye ifa lemibumba, kunye nesilayidi sangaphandle siqhuba i-ring engasebenziyo. Kwangelo xesha, umnini wento engenanto uqala ukuba acinezele umda weplate yentsimbi, kwaye emva koko isilayidi sangaphakathi seSlide. Ngapha koko, into esiyibiza ngokuba ngumatshini otyhafileyo ligama eliqhelekileyo, le nto sihlala sibiza umatshini wokubhoboza. Igama lesayensi kufuneka libizwe ngokubaluleka.
Umatshini wokushicilela we-hydraulic (uhlobo lwe-hydraulic cinezela) isebenzisa ioyile ekhethekileyo ye-hydraulic njengempompo ye-hydraulic njengomthombo wamandla. Ioyile ye-hydraulic ingena kwi-cylinder / piston ngepayipi ye-hydraulic ngamandla empompo, kwaye emva koko zingaphi kwi-Cylinder / I-Piston yamatywina ahlukeneyo ahlukile, kodwa bonke badlala indima ye Ukutywina, ukuze ioyile ye-hydraulic ayinakuvuza. Okokugqibela, nge-valve enye, ioyile ye-hydraulic ijikelezwe kwitanki yeoyile ukwenza i-cylinder / i-piston yomjikelo wokwenza umsebenzi wokugqibezela isenzo esithile njengohlobo loomatshini.
Ifanitshala yefanitshala yefanitshala-AliceSi (Alice) singumenzi weempawu zefanitshala, sinokuvelisa i-zinc, i-aluminium, ubhedu, i-PVC, njl. Iimpawu eziveliswayo zikukhanya kwaye zisebenza, zintle kwaye zinesisa, ngeenkcukacha ezibalaseleyo, umsebenzi ogudileyo, kunye nembono yomeleleyo. Yindlela eqhelekileyo yokuphambanaUAlice owuthelezele ifanitshala yefanitshala yefanitshala kunye nexabiso elifanelekileyo - i-Alice, umzi-mveliso wakho kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-100, iindleko zingaphantsi kwe-2% yomgangatho ofanayo.
Ukuba unemibuzo emininzi, bhala!